राष्ट्र संघीय अनुगमनकर्ताहरु द्वारा नेपालको पश्चिम भागको हातहतियार भण्डारण र दर्ताको काम समाप्त भएको छ । या कुरा नेपालस्थित महा–सचिवका विशेष प्रतिनिधि ईयान मार्टिनले शुक्रवार आफ्नो कैलाली र सुर्खेतस्थित जनमुक्ति सेनाका शिविरस्थलहरुको भ्रमण पछि पुष्टि गरे । सातौं मुख्य शिवीरस्थलमा अन्तिम करिव सय जना लडाकुहरुको समूहको हात हतियारको दर्ता र भण्डारण कार्य भइरहेको बेला मार्टिन कैलाली पुगेका थिए । त्यहाँ उनलाई वरिष्ठ राष्ट्र संघीय हात हतियार अनुगमनकर्ता जनरल जान एरिक विल्हेलम्सेनले भेटेका थिए । सरकार र नेकपा (माओवादी) बिचको संझौता अनुरुप हातहतियारलाई कार्गो कन्टेनरहरु भित्र तख्ताहरुमा भण्डारण गरिन अगाडि दर्ता टोलीहरुले हातहतियारको क्याटलग गर्ने र बार कोड गर्ने काम गरेका थिए । यी कन्टेनरहरुमा ताला लगाउन र चौविसै घण्टा राष्ट्र संघले अनुगमन गर्ने गरिन्छ । सुर्खेतको हातहतियार भण्डारण कार्य विहिवार नै पूरा भएको थियो । मार्टिन त्यहाँ अपरान्ह पुगेका थिए । कैलालीमा मार्टिनलाई जनमुक्ति सेनाका कमाण्डर प्रज्वलले र सुर्खेतमा कमाण्डर प्रतीकले स्वागत गरेका थिए भने दुव जनाले शिविरहरुमा त्यहाँका अपर्याप्त भौतिक पूर्वाधारहरु बारेका गुनासाहरु पोखे । “पूर्वका दुईवटास्थलहरुमा बाहेक हातहतियारहरुको दर्ता र भण्डारणको कार्य अब सकिँदै छ । शान्ति प्रक्रियामा यो एउटा महत्वपूर्ण कडी हो । तर शिविरहरुको व्यवस्थापनको अवस्था निकै पछि परेको छ । म यि सवालहरु बारे सरकार संग कुरा उठाउन चाहन्छु ,”मार्टिनले भने । English Version: http://un.info.np/Net/NeoDocs/View/197 #608 #197 #pair
PDF | File Size: 28 KB Download
राष्ट्र संघीय अनुगमनकर्ताहरु द्वारा नेपालको पश्चिम भागको हातहतियार भण्डारण र दर्ताको काम समाप्त भएको छ । या कुरा नेपालस्थित महा–सचिवका विशेष प्रतिनिधि ईयान मार्टिनले शुक्रवार आफ्नो कैलाली र सुर्खेतस्थित जनमुक्ति सेनाका शिविरस्थलहरुको भ्रमण पछि पुष्टि गरे। सातौं मुख्य शिवीरस्थलमा अन्तिम करिव सय जना लडाकुहरुको समूहको हात हतियारको दर्ता र भण्डारण कार्य भइरहेको बेला मार्टिन कैलाली पुगेका थिए । त्यहाँ उनलाई वरिष्ठ राष्ट्र संघीय हात हतियार अनुगमनकर्ता जनरल जान एरिक विल्हेलम्सेनले भेटेका थिए । सरकार र नेकपा (माओवादी) बिचको संझौता अनुरुप हातहतियारलाई कार्गो कन्टेनरहरु भित्र तख्ताहरुमा भण्डारण गरिन अगाडि दर्ता टोलीहरुले हातहतियारको क्याटलग गर्ने र बार कोड गर्ने काम गरेका थिए । यी कन्टेनरहरुमा ताला लगाउन र चौविसै घण्टा राष्ट्र संघले अनुगमन गर्ने गरिन्छ । सुर्खेतको हातहतियार भण्डारण कार्य विहिवार नै पूरा भएको थियो । मार्टिन त्यहाँ अपरान्ह पुगेका थिए । कैलालीमा मार्टिनलाई जनमुक्ति सेनाका कमाण्डर प्रज्वलले र सुर्खेतमा कमाण्डर प्रतीकले स्वागत गरेका थिए भने दुव जनाले शिविरहरुमा त्यहाँका अपर्याप्त भौतिक पूर्वाधारहरु बारेका गुनासाहरु पोखे । “पूर्वका दुईवटास्थलहरुमा बाहेक हातहतियारहरुको दर्ता र भण्डारणको कार्य अब सकिँदै छ । शान्ति प्रक्रियामा यो एउटा महत्वपूर्ण कडी हो । तर शिविरहरुको व्यवस्थापनको अवस्था निकै पछि परेको छ । म यि सवालहरु बारे सरकार संग कुरा उठाउन चाहन्छु ,”मार्टिनले भने । मार्टिनको डेलिगेशनमा राष्ट्र संघीय डिस्पोजल अफ माईन्स, ईम्प्रोभाईज्ड एक्सप्लोसिभ डिभाईसेस र अन एक्सप्लोडेड अर्डनान्सका दुईजना विशेषज्ञहरु पनि थिए । उनिसंग ईन्टरिम टास्क फोर्स (आई टि एफ) का कमाण्डर बि. बि. गुरुब पनि थिए । आई टि एफ मा नेपाली भूतपुर्व भारतिय सैनिक र बृटिश सैनिकहरु छन् । उनिहरुले राष्ट्र संघीय मिसन अन्मिनका सबैजना नेपाल नआईसकेको अवस्थामा राष्ट्र संघीय हातहतियार अनुगमनकर्ताहरुको अग्रिम समुहको कार्यमा सहयोग पुर्याउने काममा निकै महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका छन् ।
PEACE, CONFLICT, CONSTITUTIONS, PEACE AGREEMENTS, PEACEBUILDING, PEACEMAKING, POLTICAL PARTIES, POLITICAL CONDITIONS, ARMED CONFLICTS, POLITICAL SYSTEMS, PEACE MOVEMENTS
राष्ट्र संघीय अनुगमनकर्ताहरु द्वारा नेपालको पश्चिम भागको हातहतियार भण्डारण र दर्ताको काम समाप्त भएको छ । या कुरा नेपालस्थित महा–सचिवका विशेष प्रतिनिधि ईयान मार्टिनले शुक्रवार आफ्नो कैलाली र सुर्खेतस्थित जनमुक्ति सेनाका शिविरस्थलहरुको भ्रमण पछि पुष्टि गरे । सातौं मुख्य शिवीरस्थलमा अन्तिम करिव सय जना लडाकुहरुको समूहको हात हतियारको दर्ता र भण्डारण कार्य भइरहेको बेला मार्टिन कैलाली पुगेका थिए । त्यहाँ उनलाई वरिष्ठ राष्ट्र संघीय हात हतियार अनुगमनकर्ता जनरल जान एरिक विल्हेलम्सेनले भेटेका थिए । सरकार र नेकपा (माओवादी) बिचको संझौता अनुरुप हातहतियारलाई कार्गो कन्टेनरहरु भित्र तख्ताहरुमा भण्डारण गरिन अगाडि दर्ता टोलीहरुले हातहतियारको क्याटलग गर्ने र बार कोड गर्ने काम गरेका थिए । यी कन्टेनरहरुमा ताला लगाउन र चौविसै घण्टा राष्ट्र संघले अनुगमन गर्ने गरिन्छ । सुर्खेतको हातहतियार भण्डारण कार्य विहिवार नै पूरा भएको थियो । मार्टिन त्यहाँ अपरान्ह पुगेका थिए । कैलालीमा मार्टिनलाई जनमुक्ति सेनाका कमाण्डर प्रज्वलले र सुर्खेतमा कमाण्डर प्रतीकले स्वागत गरेका थिए भने दुव जनाले शिविरहरुमा त्यहाँका अपर्याप्त भौतिक पूर्वाधारहरु बारेका गुनासाहरु पोखे । “पूर्वका दुईवटास्थलहरुमा बाहेक हातहतियारहरुको दर्ता र भण्डारणको कार्य अब सकिँदै छ । शान्ति प्रक्रियामा यो एउटा महत्वपूर्ण कडी हो । तर शिविरहरुको व्यवस्थापनको अवस्था निकै पछि परेको छ । म यि सवालहरु बारे सरकार संग कुरा उठाउन चाहन्छु ,”मार्टिनले भने । मार्टिनको डेलिगेशनमा राष्ट्र संघीय डिस्पोजल अफ माईन्स, ईम्प्रोभाईज्ड एक्सप्लोसिभ डिभाईसेस र अन एक्सप्लोडेड अर्डनान्सका दुईजना विशेषज्ञहरु पनि थिए । उनिसंग ईन्टरिम टास्क फोर्स (आई टि एफ) का कमाण्डर बि. बि. गुरुब पनि थिए । आई टि एफ मा नेपाली भूतपुर्व भारतिय सैनिक र बृटिश सैनिकहरु छन् । उनिहरुले राष्ट्र संघीय मिसन अन्मिनका सबैजना नेपाल नआईसकेको अवस्थामा राष्ट्र संघीय हातहतियार अनुगमनकर्ताहरुको अग्रिम समुहको कार्यमा सहयोग पुर्याउने काममा निकै महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका छन् ।
UNMIN - प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्र संघीय अनुगमनकर्ताहरु द्वारा नेपालको पश्चिम भागको हातहतियार भण्डारण र दर्ताको काम समाप्त भएको छ । यो कुरा नेपालस्थित महा-सचिवका विशेष प्रतिनिधिर् इयान मार्टिनले शुक्रवार आफ्नो कैलाली र सर्ुर्खेतस्थित जनमुक्ति सेनाको शिविरस्थलहरुको भ्रमण पछि पुष्टि गरे । सातौं मुख्य शिवीरस्थलमा अन्तिम करिव सय जना लडाकुहरुको समूहको हात हतियारको दर्ता र भण्डारण कार्य भइृरहेकै बेला मार्टिन कैलाली पुगेका थिए । त्यहाँ उनलाई वरिष्ठ राष्ट्र संघीय हात हतियार अनुगमनकर्ता जनरल जान एरिक विल्हेलम्सेनले भेटेका थिए । सरकार र नेकपा -माओवादी) बिचको संझौता अनुरुप हातहतियारलाई कार्गो कन्टेनरहरु भित्र तख्ताहरुमा भण्डारण गरिनु अगाडि दर्ता टोलीहरुले हातहतियारको क्याटलग गर्ने र बार कोड गर्ने काम गरेका थिए । यी कन्टेनरहरुमा ताला लगाउने र चौविसै घण्टा राष्ट्र संघले अनुगमन गर्ने गरिन्छ ।
MAOIST GON, MONITORING